I-Google Earth - Geofumadas
Ama-geomoments - Imizwelo nendawo kuhlelo lokusebenza olulodwa
Yini amaGeomoments? Inguquko yesine yezimboni isigcwalise ngentuthuko enkulu kwezobuchwepheshe kanye nokuhlanganiswa kwamathuluzi nezixazululo zokuthola isikhala esinamandla nesinembile somhlali. Siyazi ukuthi wonke amadivayisi eselula (omakhalekhukhwini, amathebulethi, noma i-smartwatch) ayakwazi ukugcina imininingwane eminingi, njengemininingwane yasebhange, ...
Android I-GIS Google Earth GPS
Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, Innovations, Inthanethi kanye Amabhulogi, eziningana
Isifundo seGoogle Earth: kusuka kokuyisisekelo kuya kokuthuthukile
I-Google Earth yisoftware eza nokuguqula indlela esibona ngayo umhlaba. Okuhlangenwe nakho kokuzungeza i-sphere ngenkathi kodwa ngobubanzi bokusondela kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba, sengathi sikhona. Lokhu kuyinkambo eyingqayizivele, kusuka kuzisekelo zokuzulazula kuze kufike ekwakhiweni kokuvakashelwa ...
Izifundo - LandWorks Izifundo zeGoogle Earth Google Earth
Ungakhulisa kanjani izakhiwo ze-3D kuGoogle Earth
Abaningi bethu bayalazi ithuluzi leGoogle Earth, futhi yingakho eminyakeni edlule sibonile ukuziphendukela kwalo okuthakazelisayo, ukusinikeza izixazululo ezisebenza ngokuya ngokuhambisana nentuthuko yezobuchwepheshe. Leli thuluzi livame ukusetshenziselwa ukuthola izindawo, ukuthola amaphuzu, ukukhipha izixhumanisi, ukufaka idatha yendawo ukwenza uhlobo oluthile lwe ...
-Google Earth / Amamephu
Ukuhlola ukunemba kwedatha yokuphakama kwe-Google - Isimanga!
I-Google Earth inikeza ukufinyelela kwedatha yakho yokuphakama ngokhiye wamahhala we-Google Elevation API. ICivil Site Design, isebenzisa leli thuba ngeSatellite yayo entsha yokusebenza kweSurface. Lo msebenzi ukuvumela ukuthi ukhethe indawo nebanga phakathi kwamaphoyinti egridi, ibuyisa indawo enemigqa yentaba ehlanganiswe ne ...
-Google Earth / Amamephu, topografia
Bona i-UTM iqondisa ku-Google Amamephu ne-Street View
Isinyathelo 1. Landa isifanekiso sokuphakelwa kwedatha. Yize i-athikili igxile ekuxhumaniseni kwe-UTM, uhlelo lokusebenza lunamathempulethi kubude nobude ngamadijithi wedesimali, kanye nakuma-degree, imizuzu namasekhondi. Isinyathelo 2. Layisha isifanekiso. Lapho ukhetha ithempulethi enemininingwane, ...
Google Earth KML IHhovisi ebulalayo
Ungalanda kanjani izithombe ezivela ku-Google Earth - i-Google Maps - i-Bing - i-ArcGIS Imagery neminye imithombo
Kwabaningi babahlaziyi, abafuna ukwakha amamephu lapho kukhonjiswa khona i-raster kusuka kunoma iyiphi ipulatifomu efana ne-Google, i-Bing noma i-ArcGIS Imagery, siyaqiniseka ukuthi asinankinga ngoba cishe noma iyiphi ipulatifomu inokufinyelela kulezi zinsizakalo. Kepha uma esikufunayo ukulanda lezo zithombe ngokulungiswa okuhle, yiziphi izixazululo ezinje ...
Okufakiwe, -Google Earth / Amamephu, I-Virtual Earth
I-Wms2Cad - ukusebenzisana nezinsizakalo ze-wms nezinhlelo ze-CAD
I-Wms2Cad iyithuluzi elihlukile lokuletha izinsizakalo ze-WMS NE-TMS kumdwebo we-CAD ukuze uthole inkomba. Lokhu kufaka phakathi imephu ye-Google Earth ne-OpenStreet maps kanye nezinsizakalo zesithombe. Ilula, iyashesha futhi iyasebenza. Ukhetha kuphela uhlobo lwemephu ohlwini oluchazwe ngaphambilini lwezinsizakalo ze-WMS noma uchaze into oyithandayo, unga ...
I-AutoCAD-AutoDesk, -Google Earth / Amamephu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Faka imephu ku-Excel - thola izixhumanisi ezindawo - izixhumanisi ze-UTM
Imephu.XL uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ufake imephu ku-Excel futhi uthole izixhumanisi ngqo kusuka kumephu. Ngaphezu kwalokho, ungakhombisa nohlu lwamabanga nobude ebalazweni. Ungayifaka kanjani imephu ku-Excel Uma uhlelo selufakiwe, luyangezwa njengethebhu elengeziwe elibizwa ngokuthi "Imephu", ngokusebenza kwe ...
Google Earth IHhovisi ebulalayo
Cartografia, -Google Earth / Amamephu, kokuqala
Landa amamephu futhi uhlele umzila usebenzisa i-BBBike
I-BBBike uhlelo lokusebenza inhloso yalo enkulu ukuhlinzeka ngesihleli sendlela ozohamba ngayo, ngebhayisikili, ngokusebenzisa idolobha nezindawo ezilizungezile. Simenza kanjani umhleli wethu womzila? Ngempela, uma singena kuwebhusayithi yakho, into yokuqala evela uhlu olunamagama amadolobha ahlukahlukene, phakathi kwe ...
Okuhlangenwe nakho kwami ​​kusetshenziswa i-Google Earth yeCadastre
Ngivame ukubona imibuzo efanayo kumagama angukhiye abasebenzisi abeza eGeofumadas bevela enjini yokusesha yakwaGoogle. Ngingayenza i-cadastre ngisebenzisa iGoogle Earth? Zinembe kangakanani izithombe zeGoogle Earth? Kungani inhlolovo yami isuswe kuGoogle Earth? Ngaphambi kokuba bangijezise ngalokho ...
I-AutoCAD-AutoDesk, cadastre, -Google Earth / Amamephu
Buka izixhumanisi zeGoogle Earth ku-Excel - futhi uziguqulele ku-UTM
Nginedatha kuGoogle Earth, futhi ngifuna ukubona ngeso lengqondo izixhumanisi ku-Excel. Njengoba ukwazi ukubona, izwe elinama-vertices ayi-7 nendlu enezingcezu ezine. Gcina idatha ye-Google Earth. Ukulanda le datha, qhafaza kwesokudla ku- "Izindawo zami", bese ukhetha "Gcina indawo njenge ..." Ngoba yifayela ...
Amakhuphoni Google Earth KML
Ukulanda, -Google Earth / Amamephu
Indlela dala imephu ngokwezifiso angafi emzamweni?
Inkampani yakwa-Allware ltd isanda kwethula Uhlaka lweWebhu olubizwa nge-eZhing (www.ezhing.com), ongathi ngalo ngezinyathelo ezi-4 ube nemephu yakho yangasese enezinkomba kanye ne-IoT (Izinzwa, IBeacons, Alamas, njll) konke ngesikhathi sangempela. 1.- Dala ukuhlelwa kwakho (iZones, Objects, Figures) - - Gcina, 2.- Qamba izinto zempahla -> Gcina, 3.- Veza ...
Google Earth Amamephu
Cartografia, Okufakiwe, -Google Earth / Amamephu, kokuqala
Landa i-Google Earth ukuze izindawo UTM
Leli fayela liqukethe izindawo ze-UTM ngefomethi ye-kmz. Uma usulandiwe kufanele uyivule iziphu. Landa ifayela lapha Landa ifayili lapha Njengesithenjwa ... izixhumanisi zomhlaba ziqhamuka ekuhlukaniseni imbulunga ibe izingxenye njengoba singenza nge-apula, ukusikeka okumile kwenziwa ngama-meridians (abizwa nge-longitudes) kanye ne ...
Vula amafayela we-shp nge-Google Earth
Uhlobo lweGoogle Earth Pro luyekile ukukhokhelwa kudala, lapho kungenzeka khona ukuvula amafayela ahlukile we-GIS neRaster ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza. Siyaqonda ukuthi kunezindlela ezahlukahlukene zokuthumela ifayela le-SHP kuGoogle Earth, noma kusuka kwisoftware ephathelene neBentleyMap noma i-AutoCAD Civil3D, noma umthombo ovulekile ...
Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu
Isikhuthazo esibalulekile se-gvSIG - Umklomelo we-Europa Challenge
Kuyajabulisa ukwazi ukuthi i-gvSIG ithole umklomelo wamazwe omhlaba ngesikhathi se-Europa Challenge yakamuva. Lo mklomelo uhlinzeka ngamathuba amaphrojekthi aletha izixazululo ezintsha nezimeme emphakathini womhlaba. Vele, uma bengeza inani ku-INSPIRE Initiative futhi basebenzise ubuchwepheshe obutholakala ku ...
Google Earth I-GvSIG OS QGIS
I-Geomarketing vs. Ubumfihlo: Umthelela we-Geolocation kumsebenzisi ojwayelekile
Kusukela yethulwa embonini yezokukhangisa, i-geolocation isibe ngumqondo wemfashini, ithathwa njengenye yezinzuzo ezinkulu zamadivayisi eselula, uma kuqhathaniswa nama-PC, ngokombono wabakhangisi. Kodwa-ke, inkinga yobumfihlo kuxoxwa ngayo, ngokusho kwabanye, eyi ...
I-GEarthView iyi-plugin ebalulekile ekuvumela ukuthi wenze umbono ovumelanisiwe wokuthunyelwa kwe-Quantum GIS kuGoogle Earth. Uyifaka kanjani i-plugin Ukuyifaka, khetha: Izengezo> Phatha izengezo bese uyayifuna, njengoba kukhonjisiwe esithombeni. Uma i-plugin isifakiwe, ingabukwa kubha yamathuluzi.…
Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, qgis
I-OkMap, engcono kakhulu yokudala nokuhlela amamephu we-GPS. MAHHALA
I-OkMap mhlawumbe ingenye yezinhlelo ezinamandla kakhulu zokwakha, ukuhlela nokuphatha amamephu we-GPS. Futhi imfanelo yayo ebaluleke kakhulu: Kumahhala. Sonke sinesinye usuku sisibonile isidingo sokumisa imephu, ukubheka isithombe, ukulayisha ifomu lesakhiwo noma i-kml kwi-Garmin GPS. Imisebenzi efana nale ...
-Google Earth / Amamephu, GPS / Izinsiza kusebenza, kokuqala
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 15 ikhasi elilandelayo
Isifundo se-Civil 3D semisebenzi yomphakathi - Izinga 3
Ukuqondanisa okuthuthukile, izakhiwo, izingxenye zokuwela. Funda ukudala imiklamo nemisebenzi eyisisekelo yomugqa ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetshenziselwe ...
Isifundo se-AutoCAD - funda kalula
Lesi isifundo esenzelwe ukufunda i-AutoCAD kusuka ekuqaleni. I-AutoCAD yisoftware ethandwa kakhulu ekwakhiweni okusizwayo ...
Isifundo se-Autodesk 3ds Max
Funda i-Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max, yisoftware ephelele kakhulu enikela ngawo wonke amathuluzi wokudala ...